Thu, Jun 4, 2020 at 8:36pm
बेत्रावती, २२ साउन । गोसाइँकुण्डमा जनैपूर्णिमाका अवसरमा लाग्ने मेलामा सहभागी हुन नुवाकोट हुँदै जाने अर्को पदमार्ग पनि व्यवस्थित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । काठमाडौँको सुन्दरीजल र नुवाकोटको समुन्द्रटार हुँदै जाने सो पदमार्ग सुधार गरिएको हो । साथै रसुवाको धुञ्चे हुँदै जाने मुख्य पदमार्ग पनि यथावत छ । हिन्दू र बौद्ध धर्मालम्वीको अस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको गोसाइँकुण्डसम्म पुग्न पर्यटकीय पदमार्ग तथा प्राकृतिक सुन्दरतासँग..
बनेपा, २१ साउन । पनौती नगरपालिका–धनेश्वरस्थित धनेश्वर महादेव प्राथमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको ‘स्वर्णिम श्रीमद्भागवत भक्ति सत्सङ्ग महायज्ञ’ को पहिलो दिनमा रु २९ लाख बराबरको दानसङ्कलन भएको छ । पशुपति अन्नपूर्ण आश्रमका अध्यक्ष डा जगदीश वैद्यले महायज्ञका अवसरमा विद्यालयको प्रगतिको कामना गर्दै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि २७ लाख रकम सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,..
नागपञ्चमी : घरघरमा नागका तस्वीर टासिँयो, पुराणमा के भनिएको छ ?
काठमाडौँ, २० साउन प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमी पर्व आज घरका ढोकामाथि ब्राह्मण पुरोहितबाट नागको तस्वीर टाँसी पूजाआजा गरेर मनाइएकोे छ । आजका दिनमा घरको ढोकामाथि नाग टाँसेमा नाग, सर्प, बिच्छी जस्ता जीवबाट वर्षभरी दुःख नपाइने धार्मिक विश्वास रही आएको छ । साथै चट्याङ, अग्निभय र मेघका कारणसमेत पीडित हुनुनपर्ने भन्ने कुराको बराहलगायतका पुराणमा उल्लेख गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक..
पोखरा, २० साउन । श्रावण शुक्ल पञ्चमीका अवसरमा सोमबार पोखरा र आसपासका नाग मन्दिर र घरघरमा नागको पूजा गरिएको छ । आज बिहानैदेखि पोखराको प्रसिद्ध कमलपोखरी, नागढुङ्गा, चिप्लेढुङ्गालगायतका स्थानमा नागको पूजाका लागि सर्वसाधारण पुगेका छन् । घरघरका साथै नागका थानमा पूजा गर्ने भक्तजनको भीड लागेकोछ । प्राचीन प्रचलनअनुसार नागको मूर्ति एवं तस्वीरमा दूध, दही, अक्षता, फूल, दुबो, कपास राखी पूजा गरी गाईको..
रसुवा, १९ साउन नजिकिँदै गरेको पवित्र तीर्थ गोसाइँकुण्ड मेलालाई केन्द्रित गरी वातावरण स्वच्छता कायम गर्न धार्मिक मार्गको सरसफाइ अभियान शुरु गरिएको छ । धुञ्चे बजारबाट शनिबारदेखि शुरु गरिएको मोटर र पैदल मार्गको सफाइ अभियान त्रिशूली नदीको तिवारी बजारतर्फ सरसफाइ सम्पन्न गरी जम्मा भएको २०० क्विन्टल भन्दा बढी फोहर व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख भाग्येन्द्र पुरुषोत्तम ढकालले बताउनुभयो । यही साउन २६ देखि ३० गते जनैपूर्णिका..
धार्मिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि म्याराथन हुँदै
काठमाडौँ, १५ साउन सिन्धुपाल्चोकको धार्मिक क्षेत्र पाँचपोखरीर्लाइ राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यही साउन ३० गते तेस्रो पाँचपोखरी ‘ट्रेल हाफ म्याराथन’ गरिने भएको छ । स्थानीय पाँचपोखरीदेखि रैथानेश्वरी मन्दिरसम्म करीब २१ किलोमिटरको दूरीमा उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका, खेलकूद विकास समितिलगायत सस्थाद्वारा यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर तामाङले समुन्द्री सतहदेखि चार हजार १००..
भक्तपुर, १४ साउन प्रत्येक श्रावण कृष्ण चतुर्दशीका दिन नेवार समुदायले मनाइने घण्टाकर्ण अर्थात् गठामुग पर्व आज भक्तपुरमा पृथक शैलीमा मनाइएको छ । विशेष गरी नेवार समुदायले परापूर्वकालदेखि मनाउँदै आएको यस पर्वमा गठामुग नाम गरेको नरभक्षी राक्षस मारिएको सम्झनास्वरूप आज साँझ भक्तपुरको टोलटोलबाट हरियो नर्कट, निगालो र गहुँको छ्वालीबाट तीनखुट्टे राक्षसको रुप बनाएर टोलटोल घुमाउँदै दोबाटो र चौबाटोमा पु¥याई जलाएर पर्व मनाइएको हो..
बिहानैदेखि दर्शनार्थीको शक्तिपीठमा घुइँचो
भक्तपुर, १४ साउन । भक्तपुरका विभिन्न शक्तिपीठमा मंगलबार बिहानैदेखि दर्शनार्थीको भीड लागेको छ । साउन शुक्ल चतुर्दशी दिन मनाइने घण्टाकर्ण अर्थात् गठेमङ्गल पर्वका अवसरमा मंगलबार बिहानैदेखि विभिन्न शक्तिपीठमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको हो । नेवार समुदायले मंगलबार बिहानै घरघरमा लिपपोत गरी शुद्ध भएर विभिन्न शक्तिपीठको दर्शन गरी त्यहाँबाट ल्याएको जल घरघरमा छर्कने प्रचलन रहँदै आएकाले मन्दिरमा भीड लागेको हो । नेवार समुदायमा रोपाइँ सकिएको..
काठमाडौँ, १३ साउन । साउन महीनाको दोस्रो सोमबार बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका शिवालयमा पवित्र नदी, ताल, तलाउ एवं पोखरीबाट शुद्ध जल लगी चढाउने भक्तजनको भीड लागेको छ । पशुपतिनाथमा वाग्मतीको शिरोभाग सुन्दरीजलबाट जल ल्याई चढाउने भक्तजनको लर्को छ । आइतबार राति नै सुन्दरीजल गई बसेका बोलबम यात्री बिहान सुन्दरीमाई मन्दिरमुनिको नदीमा स्नान गरी जल सङ्कल्प गरेपछि काँवरमा राखेर त्यहाबाट ल्याएको जल पशुपतिनाथमा..
काठमाडाैं, ६ साउन । नेपाली हिन्दु समाजमा साउन महिना यसमा पनि विशेष गरी साउने साेबमारलाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ । हिन्दु महिलाहरू विशेष गरी साउनको सोमबार शिवजीको व्रत एवं पूजा गर्ने गर्दछन् । पार्वतीले साउन महिनाभरि निराहर रही कठोर व्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेको किम्वदन्तीअनुसार महिलाहरू यसलाई विशेष महत्व दिन्छन् । उनीहरूमा साउन महिनामा शिवको पूजा गरे सबै देवताको पूजा गरेबराबर फल..
काठमाडौँ, ६ साउन । साउन महीनाको पहिलो सोमबार बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका शिवालयमा पूजाआजा एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भीड लागेको छ । साउने सोमबारका अवसरमा बिहान ३ बजेदेखि नै पशुपतिका चारै ढोका खोलिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । भक्तजन भने बिहान ३ः३० बजेदेखि पूजा एवं दर्शनका लागि लाममा बसेका थिए । अन्य विशेष पर्वमा..
काठमाडौँ, ३ साउन । वसन्तपुरकी कुमारीको हीराजडित मुकुट खोजीको विषय भएको छ । कुमारीका साथमा रहेका गरगहना जाँच गर्दा यो मुकुट जाँच समितिले पनि अवलोकन गर्न पाएको छैन । गत वर्ष गुठी संस्थानको एक समितिबाट गहना जाँच भएको थियो । गहना जाँचका क्रममा कुमारीलाई राज्यका तर्फबाट चढाइएका २२ वटा औँठीमा सुन नै नभएको पाइएको थियो । विसं १९९१ मा सरकारका तर्फबाट गुठी..
काठमाडौँ, २ साउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा रहेका बौद्ध विहारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका साथै सरसफाइ तथा हरियालीका साथ स्वच्छ वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल बज्रयान महाविहार सञ्चालन समितिको व्यवस्थापनमा महाविहारका पदाधिकारीलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका महास्थविर र स्थविरसँग राष्ट्रपति कार्यालयमा आज भएको भेटमा उहाँले गुठीको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उपत्यकाका..
काठमाडौँ, २ साउन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले साउदी अरबको मक्कामदिनामा हजयात्रा गर्न जाने हजयात्रीलाई बिदाइ गर्नुभएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गृहमन्त्री थापाले १५६ हजयात्रीलाई बिदाइ गर्नुभएको हो । आज पहिलो चरणमा उनीहरु हज गर्नका लागि त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । सो अवसरमा मन्त्री थापाले धर्मनिरपेक्ष मुलुक नेपालले सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने भएकाले मुस्लिम समुदायलाई पनि हज गर्नका लागि मक्कामदिना पठाइएको बताउनुभयो..
साउन शुरु भएसँगै पशुपतिमा भक्तजनको भीड व्यवस्थापनका लागि तयारी
काठमाडौँ, १ साउन यस वर्ष साउन महीनामा पशुपति आउने भक्तजनको भीड व्यवस्थापन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयारी गरेको छ । साउन महीना शुरु भएसँगै पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको भीड बढ्न थालेकाले लाम व्यवस्थापन, सुरक्षा, जुत्ता तथा चप्पल कक्ष थप गर्नेलगायत तयारी शुरु गरिएको कोषका उपनिर्देशक प्रेमहरि ढुङ्गानाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । साउनमा भगवान् शिवको महिमाबारे वर्णन र श्रवण गरिने भएकाले पशुपतिनाथलगायत देशभरका..
१ साउन, काठमाडौं । साउन लागेलगत्तै हिन्दू महिलामा छुट्टै उत्साह र उमङ्ग हुन्छ । रातो, पहेँलो र हरियो चुरापोते तथा कपडामा सजिएका महिलाको मन्दिर र बाटोघाटोमा चहलपहल देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा किशोरीमा समेत मेहन्दी र हरियो चुरा लगाउने ‘क्रेज’ बढेको छ । धेरैले धार्मिक विश्वासमा यसो गरेका छन् भने कतिले फेसनका रूपमा । खासगरी साउनको सोमबार शिवजीको व्रत र पूजा गर्ने चलन..
काठमाडौँ, १ साउन । विभिन्न मठमन्दिरका अर्बौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर बेचेको आरोप लागेका महोत्तरीको लक्ष्मीनारायण मठ मटिहानीका मानमहन्त जगन्नाथ दास वैष्णवलाई गुठी संस्थानले निलम्बन गरेर छानबिन सुरु गरेको छ। जगन्नाथले सरकारी जग्गा बिक्री गरेर दुरुपयोग गरेको आरोप लागेपछि छानबिनका लागि निलम्बन गरिएको संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरीले बताए। ‘विभिन्न जिल्लामा जग्गा बिक्री गरेको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएपछि जगन्नाथलाई निलम्बन गरेका..
काठमाडौँ, ३१ असार । जनकपुर–एक महन्तले गुठी संस्थानअन्तर्गत विभिन्न मठ मन्दिरका अर्बौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर बेचेको तथ्य फेला परेको छ। महोत्तरी महिटानी गाविस स्थायी घर भएका लक्ष्मीनारायण मठ मटिहानीका मानमहन्त जगन्नाथ दास वैष्णवले सबा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी जमिन बिक्री गरेका हुन्। सरकारी जमिनको संरक्षण नहुँदा संस्थानअन्तर्गत रुपन्देही र धनुषा जिल्लामा लक्ष्मी नारायण, रामजानकीलगायत मन्दिरको करिब सात बिघा..
काठमाडौं, ३० असार । असार ३१ गते अर्थात मंगलबार राति खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । नेपाली समय अनुसार मंगलबार राति १ बजेर ४६ मिनेटमा प्रारम्भ हुने ग्रहण बुधबार बिहान ४ बजेर ४४ मिनेटसम्म लाग्ने बताइएको छ । सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा सीधा रेखामा पर्दा पृथ्वीको छायाँ चन्द्रमामा पर्छ र खण्डग्रास ग्रहण लाग्ने गर्दछ । खण्डग्रास पूर्णिमाको रातिमा मात्रै लाग्छ। महर्षि वेदव्यासको..
फेरियो धान रोप्ने शैली, विरानो बन्यो असारे मौलिक भाका
बेझाड, ३० असार ‘हलगोरु झरे खेताली झरे वेंशीको रोपाइँमा, सङ्गी र साथीको झझल्को आउँछ एकलो बेलैमा’............. । धान रोपाइँ गर्दा गाइँने यस्ता पुराना मौलिक गीत अहिले सुन्न पाइँदैन । यी मौलिक संस्कृति गाउँघरमा हराइसकेका छन् । पहिले पहिले गाउँघरमा असारे गीत, उवाली गीत गाउने र पञ्चेबाजाको तालमा खेतमा धान रोप्ने चलन थियो । अहिले भने यो परम्परा समुदायबाटै लोप हुन थालेको छ । ‘आज नि..
काठमाडौँ, २७ असार । प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घरघरमा तुलसीको बिरुवा सारी चार महीनासम्म गरिने विशेष पूजा शुरु गरिँदैछ । एक महीनाअघि जेष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घरघरको तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ । सनातन वैदिक परम्पराअनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ । आजदेखि कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ । आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कात्तिक शुक्ल..
काठमाडौंमा ‘तीज विशेष’ मेला आयोजना हुने
काठमाडौँ, २६ असार श्रावणको १६ गतेदेखि २० गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘तीज विशेष मेला’ आयोजना हुने भएको छ । महिला सृजनशील केन्द्रले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी तीजको अवसर पारेर सदाझैं यस वर्ष पनि सो मेला आयोजना गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो । देशभरका महिला उद्यमीहरु सहभागी हुने सो मेलामा तीज विशेषका सामग्रीहरुको प्रर्दशनी रहने केन्द्रकी अध्यक्ष मिलु थापाले बताइन् । मेलामा २ सय भन्दा..
मकवानपुर, २५ असार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले धर्म, संस्कृति र पहिचान रक्षाको निमित्त पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित फाँट बजारमा आयोजित सप्ताह ज्ञान महायज्ञको समापन समारोहमा आज अध्यक्ष थापाले बढ्दो धर्म परिवर्तनलाई रोक्न नसके समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो । समय क्रममा सरकार तथा व्यवस्था परिवर्तन हुने..
काठमाडौँ, २५ असार । ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको पाल्पास्थित रानीमहल दरबारको जग्गा अतिक्रमण भएको छ। मालपोत–नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा रानीमहलको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको हो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले रानीमहलको ३० रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा भएको देखाएको छ। नापी विभागको नक्सामा कित्ताकाट नभएको जग्गा नापी कार्यालय पाल्पाको नक्सामा कित्ताकाट पाइएको केन्द्रका सूचना अधिकृत डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए। साविकको बोधगुम्बा गाविस वडा नम्बर २..
कांग्रेस नेता कार्कीले ६२ वर्षकाे उमेरमा तेस्रो बिहे गर्दै
काठमाडौं, २३ असार । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तेस्रो पटक बिहे गर्ने भएका छन् । तेस्राे विवाह उनले उत्सव सम्शेर राणाकी नातिनीसँग ६२ वर्षकाे उमेरमा गर्न लागेका हुन् । यद्यपि दुलहिको नाम भने खुलेको छैन । बिहेअघि उनले आइतबार साँझ थापाथलीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा टीकाटालो गरेका छन् । बिहेको मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन । टीकाटालो कार्यक्रममा परिवारका सीमित सदस्यहरुमात्र रहेको स्रोतले बतायो । कार्कीले यसअघि..
काठमाडौँ, २१ असार मल्लकालीन परम्पराको निरन्तरताका साथ पाटनमा यमदूतको चित्र बनाइएको छ । पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको ठूलो घण्ट अगाडी दरबार प्रवेश गर्ने पुरानो ढोका छ। असारमा धान रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै हरेक वर्ष सुमन चित्रकार ढोकाको दायाँ बायाँ यमदूतको चित्र बनाउन आइपुग्छन्। ढोकामा खड्ग र बज्र बोकेको दुई यमदूतका चित्र बनाउने गरिन्छ। दरबारको सुरक्षाका लागि करिब ३०० वर्ष अघि देखि प्रवेशद्वारमा..
बागलुङ, २० असार पर्यटकीय लेक घुम्टेमा अवस्थित सिद्ध र भैरव मन्दिरको पुनःनिर्माण गरिएको छ । दुई महीनामा मन्दिर पुनःनिर्माण सकिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झङ्कबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । पुनःनिर्मित मन्दिरमा बिहीबार सिद्ध र भैरवको मूर्ति प्रतिस्थापन गरिएको छ । ऐतिहासिक महत्वको मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि पर्यटन मन्त्रालयले रु २० लाख उपलब्ध गराएको थियो । सदियौँदेखि झुपडीमा रहेका मन्दिरलाई स्थानीयवासीले विसं २०५६ मा आधुनिक र..
अर्घाखाँची, १७ असार । नेपालका विभिन्न तीर्थस्थल जसको आआफ्नै महत्व छ । तीमध्येको एक हो अर्घाखाँचीको सुपा देउराली । जे भाकल गर्योे त्यो पुग्ने जनविश्वासका आधारमा यस तीर्थस्थलको महिमा र गरिमा बढ्दै गएको छ । अर्घाखाँचीको गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडकखण्डअन्तर्गत ४७ किमि दूरीमा महाभारत पर्वत शृङ्खलाको ठूलाठूला पहाडको खोचमा प्राचीन शैलीमा निर्मित सुपा देउरालीको मन्दिर छ । प्राकृतिक रुपमा अत्यन्त रमणीय, शान्तियुक्त स्थानमा रहेको..
‘हरेक राजनीतिक दलमा मुस्लिम समुदायको सहभागिता बढ्नुपर्छ’
ललितपुर, ११ असार शहरी विकासमन्त्री महोम्मद इस्तियाक राईले हरेक राजनीतिक दलमा मुस्लिम समुदायको सहभागिता अझ बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मुस्लिम आयोगले आज जावलाखेलमा आयोजना गरेको ‘मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तीकरण’सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले जति धेरै मुस्लिम जातिको बाहुल्यता राजनीतिक दलमा बढ्छ उत्ति नै अधिकार सुनिश्चित गराउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । मुस्लिम आयोगका पहिलो अध्यक्ष शमीम अन्सारीलाई मन्त्री राईले मुस्लिम हकहितका..
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको व्यवस्था गर्ने
भादगाउँ, १० असार । आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको स्थापना गर्ने भएको छ । नगरपालिकाको चालू पाँचौँ नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप भक्तपुरको जीवनशैली, रहनसहन र संस्कृति झल्किने सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको स्थापना गर्ने नीति लिएको हो । पारित गरेको नीतिमा..
Results 608: You are at page7of 21